↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ "Sizes, shapes, and derived properties of the saturnian satellites after the Cassini nominal mission" (July 2010). Icarus 208 (1): 395–401. doi:10.1016/j.icarus.2010.01.025. Bibcode: 2010Icar..208..395T. Archived 23 December 2018 at the Wayback Machine.
↑ Saturn - Moons။ NASA။ 16 November 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပန်_(ဂြိုဟ်ရံလ)&oldid=739574" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၁ မတ် ၂၀၂၂၊ ၀၀:၁၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။